Ysla 1-Igumbi lokulala Villa w / Pool yaBucala San Juan LU - I-Airbnb
Ysla 1-Igumbi lokulala Villa w / Pool yaBucala San Juan LU
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguStephany
*NCEDA UQHAGAMSHENE NOMBUNGAZI PHAMBI UCELE UKUBHESHA ukuze uqinisekise ukuthotyelwa kwezikhokelo neemfuno ze-COVID-19*
YSLA: Ukurhoxa kwakho okuthe cwaka eSurftown LU
I-Ysla Villa San Juan ibonelela nge-villa enechibi labucala, ikhitshi langaphandle kunye nendawo yokutyela. Nceda uqaphele ukuba kolu luhlu, iindwendwe zinokufikelela kuphela kwi-1 yamagumbi amabini okulala. Oku kulungele izibini ezikwindawo yokuhlala. Ifakwe kulwahlulo oluzolileyo, yimizuzu emi-6 nje yokuqhuba ukusuka kwindawo yokusefa eSan Juan. Ulwandle kwakhona kukuhamba nje okufutshane.
Yonwabela ubunewunewu bepomakazi elinamagumbi okulala ayi-1 kunye nepuli yakho. Oku kulungele abantu abathandanayo abakuhambo kwaye bafuna ukuba zodwa. Iindwendwe zivumelekile nokuba zisebenzise ikhitshi eliphandle nendawo yokoja ukuze zihlale kamnandi phandle.
*Elona nani likhulu labantu abayi-2 (iindwendwe ziza kukwazi ukufikelela kwelinye lamagumbi ayi-2 asendlini, elinye igumbi liza kuvalwa)
*Nceda ufunde uze uvumelane nayo yonke imithetho yekhaya ngaphambi kokubhukisha
*Nceda uqhakamshelane nombuki zindwendwe ukuze ufumane izikhokelo nezinto ezifunekayo zeCOVID-19 eSan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan
Imizuzu emi-6 ngemoto ukusuka kwiziko le-surf yase-Urbiztondo, eSan Juan
Imizuzu emi-5 ukusuka eFlotsam
1-2 imizuzu ukuhamba ukuya elunxwemeni
Now hosting the perfect villas for your next Elyu getaway:
Ysla Villa San Juan, La Union
Ycasa Villas San Juan, La Union